Gamoo halleellaa Raahsiyaatin gubate, Yukireen
Yemuu waraanii Raashaa Torban sadaffaadhaaf Yukireen keessatti haleelaa isaa itti fufee jiruu kanatti , rakkinicha mariidhaan hiikudhaaf yaaliin taasifamaa jiru ammas itti fufee jiraa. Haanga’oonii biyyottan lammanii marii kanaan duraa qaamaan wal arganii biyyaa Ollaa Beellaaruus keessatti taasisaa turan guyaa har’aas vidiyoodhaan itti fufuun isaanii gabasaamaa jira. Amma ammaatti garuu waliigalteen irraa gahamee hin argamne.
Walwaraansaa kanaan kan ka’ee yemuu namoottan miiliyoonatti lakkaawaman yukireeniin gad lakkisanii baqachaa jiraan kanatti namoonii muraasni biyyattidhaa alla turan immoo lammii keenyaa gargaaruu qabnaa jedhanii gara biyyaatii deebi’aa akka jiran gabasamaa jira.
Akka biyyii Ollaa yukireen Poolaand jettutti ergaa walwaraansii jalqabamee tornban sadan darbanii as namoonii kuma 186,000 yukireenitii kan deebi’an yemuu ta’u kana keessaa harkii 83 lammiilee Yukireen.
Iraan Misaa’eela Baalistiik Dhukaafte
Gaazexessoonni hidhaman akka hiikaman gaafatame